ပဲလေ့စ်ကို ရှုံးခဲ့ခြင်းအား မေ့ပစ်ပြီး ပြန်နိုးထရန် ဖာဘီယန်ဒဲလ် တိုက်တွန်း၊ ယမန်နှစ်ကထက် ပ?? - Yangon Media Group
ပဲလေ့စ်ကို ရှုံးခဲ့ခြင်းအား မေ့ပစ်ပြီး ပြန်နိုးထရန် ဖာဘီယန်ဒဲလ် တိုက်တွန်း၊ ယမန်နှစ်ကထက် ပ??
မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူ ဖာဘီယန်ဒဲလ်က အသင်းအ နေဖြင့် ပဲလေ့စ်နှင့်ပွဲတွင် အိမ်ကွင်း၌ ပထမဆုံးရှုံးပွဲကြုံ တွေ့ခဲ့ခြင်းမှာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသော်လည်း အတိတ်ကိုမေ့ထားပြီး လက်စတာနှင့်ပွဲတွင် နိုင်ပွဲပြန်ယူရမည်ဖြစ် ကြောင်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ မန်စီးတီးသည် အဆိုပါပွဲတွင် ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့ခြင်းကြောင့် နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်သုံးပွဲတွင် နှစ်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဇယားကိုဦးဆောင် နေသော လီဗာပူးနှင့် လေးမှတ်အထိကွာဟသွားခဲ့ရာအရှုံးကို ဆက်တွေးမနေဘဲ နိုင်ပွဲပြန်လည်ရယူရန် ဒဲလ်က တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖာဘီယန်ဒဲလ်က ”အတိတ်မှာတွဲခိုမနေဘဲ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ ရှင်သန်ဖို့က အ ရေးကြီးပါတယ်။ ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲက ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်လို့ အခု နောက်လာမယ့်ပွဲကိုပဲ အာရုံစူးစိုက်ရတော့မှာပါ။ ဒီလာမယ့်ပွဲမှာ အနိုင်သုံးမှတ်ရယူနိုင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါ တယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အဓိက,ကစားသမားသုံးဦးဖြစ်သော အဂူရို၊ ဒီဘရူနီနှင့် မာရက်ဇ်တို့မှာ ပဲလေ့စ်နှင့်ပွဲတွင် လူစားဝင်ကစားခဲ့ကြပြီးနောက် လက်စတာနှင့်ပွဲတွင်ပွဲထွက်က စားဖွယ်ရှိနေရာ ¤င်းတို့ပြန်ကစားနိုင်ခြင်းကနိုင်ပွဲပြန် ရရန် အထောက်အကူ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒဲလ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာက ယမန်နှစ်ရာသီက ချန်ပီယံဆုရယူနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်တွင် အသင်းမှာ အသေးစိတ်အချက်တချို့တွင် ယမန်နှစ်ကထက်ပိုကောင်းလာခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂွါဒီယိုလာက ”ကျွန်တော်တို့အတူရှိတဲ့အချိန်ပိုများလာလို့ အသေးစိတ်အချက် တွေကိုကြည့်ရင် အသင်းဟာ မနှစ်က ထက်ပိုကောင်းလာပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကစားကွက်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ ဖိအားပေးမှုအပိုင်းတွေမှာ မတူညီတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့သလို ခံစစ်က တိုက်စစ်ကိုကူး ပြောင်းရာမှာလည်း ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းတွေ ပိုများလာပါတယ်။ ခံစစ်ကစားတဲ့ အ ချိန်မှာလည်း ပိုပြီးကျစ် လျစ်လာပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဂွါဒီယိုလာက ရှုံးထွက်ဖလားပြိုင်ပွဲများနှင့် ချန်ပီယံလိဂ်တို့တွင် ခြောက်ပွဲ၊ ခုနစ်ပွဲသာ ကောင်း ကောင်း ကစားနိုင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်တွင်မူ သုံးရက်လျှင် တစ်ပွဲကစားရနိုင်သည့်အခြေအနေတွင် အစဉ် ခြေစွမ်းပြနိုင်ရန် လိုအပ်သည် ဖြစ်ရာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီ ယံဆုကို ရယူနိုင်ရေးကများစွာခက်ခဲကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြား ခဲ့သည်။
ကျပ်တစ်သောင်းတန် အတုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး စင်ကာပူနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေဟု သမ္မတရုံးပြော
ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို ယနေ့ထိ ပုံဖျက်မှုရှိနေဟု ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုကြီးပြော
လာမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ခေါ်ယူချိန်၌ လျှောက်ထားသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတိုင်း ဝင်ခွင့်ရရ
စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့မဈေးခန်းမတွင် ရွှေမင်းဝံအဆင့်မြင့်ဈေးဆိုင်ခန်း လျှောက်ထားသူများကို ဒ??